Umphezulu Go: enye indlela eya kwi-iPad Windows 10 kwaye phantse ngexabiso elifanayo | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iilaptop, amacwecwe
Ukusukela ekunikezelweni kwemodeli yokuqala ye-iPad, umva ngo-2010, inkampani esekwe eCupertino ihlala iphawula indlela eya phambili yale ecosystem, ikhosistim enezinto eziphantsi naphantsi ngenxa yenqanaba eliphantsi lokuhlaziywa ngabasebenzisi. Nangona iApple ifake amanqaku amatsha kwiminyaka yakutshanje kuhlobo lwe-iOS ye-iPad, oku iyaqhubeka nokubonelela ngemida eliqela.
IMicrosoft yenze i-ecosystem entsha yamacwecwe, kodwa ngokungafaniyo nemodeli ka-Apple, zezi ilawulwa luhlobo olupheleleyo lweWindows. Kodwa ibingaphandle kwexabiso.
Inkampani esekwe eRedmon isandula ukubhengeza into enokuba yeyenye evumayo kubo bonke abo basebenzisi abakhangela ithebhulethi enexabiso eliphantsi, engabizi kakhulu inenguqulo epheleleyo yeWindows 10. Sithetha ngeSurface Go. Umphezulu Go licwecwe I-intshi ezili-10, zinobukhulu obunga-243,8 x 175,2 kunye no-7,6 weemilimitha kunye nobunzima obuyi-544 gram. Ukuba sidibanisa ikhibhodi yohlobo lwekhava, ubunzima bonyuka bube yi-771 gram.
1 Ukucaciswa komphezulu wokuya
2 Ixabiso kunye nokufumaneka kweSurface Go
3 Ukwandisa usapho lomphezulu
Ukucaciswa komphezulu wokuya
Umphezulu Go usinika Umfundi wekhadi le-MicroSD, i-headphone jack kunye ne-USB-C port. Ngaphakathi, iiWindows zisinika ubumbeko olwahlukeneyo ngokwendlela yokusebenza kwenkqubo: Windows 10 Ikhaya elinemowudi S kunye Windows 10 Ipro ngeNdlela yeS. IWindows S yinguqulelo yeWindows ekuvumela kuphela ukuba ufake usetyenziso olufumaneka kwivenkile yesicelo seMicrosoft, nangona sinako khubaza le mowudi ukuguqula isixhobo sibe yi-PC oza kuyisebenzisa kunye nokufaka nasiphi na isicelo.
Ngokumalunga neenkcukacha zobuchwephesha, iSurface Pro ilawulwa yiprosesa ye-Intel Pentium Gold 4415Y 1,6 GHz.Kuba yiPC, ukusebenza kwayo kungahluka ngokuxhomekeke kubungakanani be-RAM esiyifumana ngaphakathi. Le modeli iyafumaneka kwi 4 kunye ne-8 GB yeenguqulelo ze-RAM. Ngokumalunga nokugcinwa, iMicrosoft isinika iimodeli ezi-3: i-64 GB eMMC, i-128 GB ye-SSD kunye ne-256 GB SSD.
Iscreen, enye into ethathelwa ingqalelo ngabasebenzisi abaninzi xa bethenga ithebhulethi, isinika Iphaneli ye-intshi eyi-10 ngesisombululo se-1.800 x 1.200 kunye nomlinganiso wescreen se-3: 2. NgokukaMicrosoft, ukuzimela kwe-Surface Go kufikelela kwiiyure ezili-9, ukuzimela okuyibeka phantse kubude obufanayo ne-Apple iPad.
Le modeli intsha ikuluhlu lweSurface, iyahambelana nePenisi yePhezulu, ibandakanya ifayile ye- Isibiyeli esinokurhoxiswa ngasemva esivumela ukuba siyibeke nakweyiphi na indawo. Ipeni yokujonga umphezulu, kunye nohlobo lweKhava ebandakanya i-trackpad, ithengiswa ngokwahlukeneyo.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweSurface Go
UMicrosoft uza kuyithengisa i-Surface Go ngo-Agasti 2 E-United States nase-Spain, ukongeza kwamanye amazwe, nangona okwangoku, kuphela inguqulo ye-Wifi eya kufumaneka ngaphandle konxibelelwano lwe-LTE, imodeli ethe inkampani iyakufika kwintengiso kwiinyanga ezizayo kwaye amaxabiso ayo akakafiki kutyhilwe.
Umphezulu Yiya nge-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcinwa kweMMC ngeKhaya leWindows S: Iidola ze-399.
Umphezulu Yiya nge-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcina iMMC ngeWindows Pro S: Iidola ze-449.
Umphezulu Yiya nge-8GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcinwa kwe-SSD ngeKhaya leWindows S: Iidola ze-549.
Umphezulu Yiya nge-8GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcinwa kwe-SSD ngeWindows Pro S: Iidola ze-599.
Umphezulu Yiya nge-8GB ye-RAM kunye ne-256GB yokugcinwa kwe-SSD ngonxibelelwano lwe-LTE: kulindelwe ukuqinisekisa ubukho kunye nexabiso.
La maxabiso angentlan kuphela kwiqela. Zombini i-Type Cover, i-Surface Pen kunye ne-mouse zithengiswa zodwa. Ixabiso lebhodibhodi yahluka phakathi kwe-99 kunye ne-129 yeedola. Ixabiso lempuku yi- $ 39 kwaye iPenface yePhezulu yi- $ 99.
Sikwimeko efanayo ne-Appl's iPade, apho ixabiso libandakanya kuphela isixhobo kwaye apho zonke izinto ezincedisayo, ikhava yebhodi yezitshixo kunye nePensile ye-Apple zithengiswa ngokuzimeleyo kumaxabiso aphezulu kunalawo anikezelwa nguMicrosoft kwezi zincedisi.
Zonke iimodeli zeSurface Go zifika kwintengiso ngeWindows S, nokuba kungokuguqulelwa kweKhaya okanye kuhlobo lwePro. nyusela kwikhaya eliqhelekileyo lasekhaya kunye nePro ngaphandle kwentlawulo.
Ukwandisa usapho lomphezulu
Ngokusungulwa kweSurface Go, uMicrosoft okwangoku uneemodeli ezi-5 ezahlukeneyo kwintengiso ngaphakathi kolu luhlu, ngaloo ndlela eqinisekisa ukuba uthathe ikhosi bekufanele ukuba ilandelwe kwiminyaka embalwa edlulileyoNangona, ngokubona inqanaba lokukhula kwale modeli yeshishini litsha, kubonakala ngathi ukulinda bekukufanele.
Obunye ubungqina bufumaneka ekuphehlelweni kwale modeli intsha ye gubungela imarike yethebhulethi, indawo yentengiso apho iSurface Pro ingenanto yakwenza ngenxa yokusebenza kwayo okuphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » Umphezulu Go: enye indlela eya kwi-iPad nge Windows 10 kwaye phantse ngexabiso elifanayo